I-Asian Art Kaftan Maxi Dress - Ama-Buddhatrends
Multi White / M Multi White / L Multi White / XL Multi White / XXL Multi White / XXXL Multi White / 4XL Multi Blue / M Multi Blue / L Multi Blue / XL Multi Blue / XXL I-Blue Blue / XXXL I-Blue Blue / 4XL
This Asia Inspired Kaftan Maxi Dress is a masterpiece from Maxi. The dress combines a vintage design with modern ukuhlolisisa ukukhiqiza into yekhwalithi ephezulu. Le ngubo ephefumulelwe e-Asian Kaftan Maxi inganikeza noma yimuphi owesifazane owawubukeka ubukeka njengamanje.
Umdwebo wengubo uhlanganiswe kahle futhi ukhonjiswe. Unamaphetheni amahle emibala ehlukahlukene; kufaka phakathi oluhlaza, olubomvu neluhlaza okwesibhakabhaka, elibekwe etafuleni elimnyama. Lo mklamo wenza isambatho sibuke ngaphandle kokukhanya okukhulu.
Imikhono Ima ngemuva nje kwe-elbow wukuqasha i-dress is ubude be-ankle kwisitayela esivamile se-kaftan. Kukhona amaphakheji on noma side wengubo. Enye ebomvu obomvu, enye iphethini, engeza ukuthinta okucashile ebuhleni bengubo.
Ingubo ingafakwa kalula ngoba noma yisiphi isenzakalo, njengoba sikhathaza wonke amabhokisi ukuze kube lula nokulula. I-style yendabuko ephefumulelwe yase-Asia ingakwenza ukwenze isixuku kuzo zonke izizathu ezifanele.
Ubude bomikhono: Ingxenye
Material: I-100% Ukotini